Umculo. 123. 340ml A Abafana Bakwa Dladla - African Jazz Pio
ⓘ Umculo. 123. 340ml A Abafana Bakwa Dladla - African Jazz Pioneers - AKING - Amabayeni Amahle - AmaGezAmahle - Amampondo - Amashayina Amahle - Amatshitshi Amhlop ..
Ikhompyutha yinto esiza kakhulu ezimpilweni zethu, yenza impilo ibe lula. Ikhompyutha ngumshini ofakwe izinhlelo ngaphakathi, yakhelwe ukwenza imisebenzi ekhaliphile ngokuzenzakalela. Leyo misebenzi ingashintshwa noma yinini ukuze ikhompyutha ikwazi ukwenze eminye imisebenzi efanayo eminingi. Isizinda esiphakathi kwekhompyutha kanye nomuntu sibizwa ngokuthi yi-interface.
Indaba Yesine Yamathoyizi iyona filimu entsha kunazo zonke ezisebenza nge-computer ezintathu ubukhulu kusuka ku Indaba Yamathoyizi futhi yenziwa ngonyaka ka-2019 istudiyo sePstrong. Inombolo yesine futhi ifaka uTom Hanks eqenjini. Indaba ingemva kwefilimu yokugcina futhi ibona lo mfanyana osiza isipuni sepulasitiki noma imfoloko iphile impilo yakhe yangempela. Le filimu yakhonjiswa okokuqala eCalifornia futhi yanqoba imali eningi kakhulu kunoma iyiphi indaba yamafilimu amathoyizi. Bekukholelwa ukuthi muhle kakhulu ngabasubathi ngenxa yendaba emnandi, umculo, iphimbo kanye nokunyakaza. Azik ...
U Tsotsi ungumfilimu we-2005 oqondiswa uGavin Hood kanti umkhiqizi nguPeter Fudakowski. Indaba ivela encwadini inoveli u Tsotsi, ebhaliwe ngumlobi waseNingizimu Afrika u-Athol Fugard. I- soundtrack iveza umculo we-Kwaito owenziwa ngumculi owaziwayo waseNingizimu Afrika uZola kanye nomculo owenziwe uMark Kilian noPaul Hepker beqokomisa ukucula umculi / umbongi waseNingizimu Afrika uVusi Mahlasela.
Galileo di Vincenzo Bonaulti de Galilei wayeyisazi sezinkanyezi sase-Italy, isayensi yezokwelapha kanye unjiniyela, kwesinye isikhathi ochazwa njenge- polymath, evela ePisa. Galileo ubizwe "ngubaba wesayensi yokufunda izinkanyezi", "ubaba wesayensi yesimanjemanje", "ubaba wendlela yesayensi", kanye "nobaba wesayensi yanamuhla". Galileo wafunda isivinini kanye ne- velocity, amandla adonsela phansi nokuwa kwamahhala, umgomo wokuhlobana, i- inertia, ukunyakaza kwe-projectile futhi wasebenza nesayensi esetshenzisiwe nobuchwepheshe, echaza izakhiwo ze- pendulums kanye "nemizila ye-hydrostatic", ...
A Abafana Bakwa Dladla - African Jazz Pioneers - AKING - Amabayeni Amahle - AmaGezAmahle - Amampondo - Amashayina Amahle - Amatshitshi Amhlophe
B Bhekumuzi Luthuli - Bhoja - Bongo Maffin - Boom Shaka
D Dark City Sisters - David Jenkins - Die Antwoord - Dlamini King Brothers
F Fahrenheit ibhendi - Failing Forward - Freshlyground
H Hugh Masekela
I IhhashElimhlophe - Ikhansela - Imithente - Inkunzi Emdaka - Ithwas Lami - Izingane Zoma
J Jabula - Jamali ibhendi - Joy ibhendi - Juluka - Just jinjer
K K2 ibhendi - Kholeka
M Mahlathini - Mahlathini and the Mahotella Queens - Makgona Tsohle Band - Malaika ibhendi - Mango Groove - Mahotella Queens - Mfazomnyama - Mgqumeni - Mtshengiseni Gcwensa
N Njencane Ngubane - Ntando
O Otis Waygood - Overtone ibhendi
P Phuzeshukela - Phuzekhemisi - Prime Circle
R The Rudimentals
S Savuka - Sbongiseni Ntombela - Seether - Shophi Ngidi - Shwi No Mtekhala - Shiyani Ngcobo - Soweto String Quartet - Stimela - Straatligkinders
T Theatre ibhendi - Thokozani Langa - Thwalofu - TKZee - Trenton and Free Radical - Trevor Jones
U Uboneni - Umahawukela - Umbuzeni
V Valiant Swart - Verity and the Shades
W Watershed ibhendi - WE ARE FREE - Women Unite
Wiktionary: umculo Umculo ungubuciko obusebenzisa umsindo ohleliwe. Ungadlalwa ngamabhendi, ngama - okhestra, abaculi abaningi noma oyedwa. Umculo uphinde ube
Umculo Wohlobo Lwe - Electronic umculo owenziwe ngezinsizakusebenza ezi - electronic okunjengama - synthesizers noma ngamamakhompyutha.
Umculo wohlobo lwe - House uhlobo lomculo we - electronic dance.
Umculo Wohlobo Lwe - Electronic dance, oyaye ubizwe ngokuthi EDM, electronica noma dance ngokujwayelekile uhlobo lomculo we - electronic odalelwe ukuba usinelwe
embonini yama filimu kuphela, asemaningi kakhulu amafilimu ewaqophela umculo Umculo wakhe unconywa kakhulu ngokujula nangomuzwa wawo. Le - athikhili iyisigcino
Basizile ukwenza umculo othandwayo ngawo - 1960s, futhi bayaphawuleka ngokusebenzisa izinhlobo eziningi ezahlukene zomsindo, ngokwesibonelo umculo wezidakamizwa
zezibalo Ukubuka izithombe ezinyakazayo Ukulalela umculo neminye imisindo eqoshiwe Ukuhlela umculo izithombe, nezithombe ezinyakazayo Ukuqopha umsindo
Masikandi umculo owasungulwa eNingizimu Afrika oculwa ngolimi lwesiZulu. Lona umculo odlwalwa kakhulu ngesigincgci.Lo lu hhlobo lomculo ludume futhi luthandwa
ne - 1960 yaphefumulelwa futhi yathonya ukuba enze umculo futhi usakaze ushintsho lwezepolitiki. Umculo wakhe wawubeka obala ngokucacile izinkinga nezinsizi
Badenhorst, umbaleki Lucas Maree, Afrikaans umdlali umculo Coenie de Villiers, Afrikaans umdlali umculo Maretha Maartens, Afrikaans inhlambi Chronological
Umculo wohlobo lwe-Eletronic Dance
Umculo Wohlobo Lwe-Electronic dance, oyaye ubizwe ngokuthi EDM, uhlobo lomculo we-electronic odalelwe ukuba usinelwe, ezindaweni ezinjengama-night club, discothèque noma emicimbini yobumnandi.
Ama-instrument omculo izinto ezisetshenziswa ekukhiqizweni komculo. Noma ngabe yini engakwazi ukukhiqiza umsindo ngendlelathizeni, ingabizwa nge-instrument, kodwa lesisihloko sijwayele ukuchaza into ekhiqiza umculo. Ama-instrument omculo angahlukaniswa ngezinhlobo kanjena: Ama-strings I-Woodwind I-Keyboard I-Brass I-Percussion